DOXIEPOO IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Doxiepoo Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Dachshund / Poodle Yakasanganiswa Imbwa Dzembwa
Tobie the Doxiepoo aine makore manomwe ekuberekwa- 'Tobie aive kapu kadiki mudiki uye aive nevhudzi diki. Amai vake vaive bhora rakatsetseka rakatsetseka Dachshund . Vhudzi rake rakazoguma rave kunge rakareba 3 inches, asi ini ndakarichengeta ndakachekera senge terrier. Akanga ari munharaunda, sembwa zhinji nevana, asi akahukura. Tobie aive nehunhu hwakanaka, uye aive akangwara. Akarwadza kuteerera kirasi, akaziva mazwi makumi mashanu, uye aive neake ega bhero. Wese munhu aida kumutora. Aive aine mamwe matambudziko eganda + nzeve, uye moyo wake wakazoguma wave wakashata. Akararama kusvika makore 11. '
Iyo Doxiepoo haisi imbwa yakachena. Muchinjikwa pakati pe Dachshund uye iyo Poodle . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwerudzi rwakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese mumuchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika ku50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
American Canine Mbeu dzakauchikwa Club = Doodle
Dhizaini Imbwa Kennel Kirabhu = Doxie Poo
International Dhizaini Canine Registry®= Doxiepoo (Doodle)
Mugadziri Wekubereka Rejista = Doodle
'Bubba the Doxie Poo ave nemavhiki matanhatu ekuberekwa - iye ari 1/2 teacup Poodle uye 1/2 diki yakareba yakareba Dachshund.'
Bubba iyo Doxie Poo puppy pamwedzi mitatu
'Bubba angangoita mwedzi gumi nepfumbamwe mumufananidzo uyu. Iye angori pasi pe5 lbs. Anoda kushambira, kuchera mujecha, vachifamba , uye imbwa inotapira kwazvo, inonyengera. Iye akanaka nedzimwe imbwa, kunyanya hombe. 'Vakoma vake' maGolden Retrievers uye anovada kuita zvidimbu. Iye akapfava kwazvo, kashoma kuhukura uye ari kwese-kutenderedza kukuru kudiki! '
Willow iyo Doxiepoo sembwa hombe nejasi rake rakapetwa zvishoma
Willow paanenge mwedzi mitanhatu yekukura— 'Willow musanganiswa we refu-vhudzi Dachshund uye Toy Poodle . Iye imbwa yakangwara kwazvo uye inotapira-yakasikwa imbwa, yakazara nehunhu uye runako. '
Willow paanenge mwedzi mitanhatu yekukura— 'Ndiye pamwe imbwa yemitambo uye ine simba panyama yati tambove nayo, uye anongova nemwedzi mitanhatu chete. Simba rake rinoita serisina muganho izvo zvinoita kuti ave shamwari huru yemwanasikana wedu wechidiki. Akaratidza kuve akaomarara uye asingatyi kana achitamba panze uyezve akagutsikana kuve mumba. '
Willow paanenge mwedzi mitanhatu yekukura— 'Kunyangwe paine poofy inoshamisa, pasi payo ese jasi pane Dachshund rakaumbwa lithe muviri mudiki. Iye zvakaoma sheds uye jasi rake rakakora uye rinowanzonamatira. Isu tichakurumidza kutarisa mukugadzirisa izvi nekuita kudimburira kwechiedza. '
Willow sembwanana kadiki— 'Isu takambove nemaDachshunds zvisati zvaitika, uye kunyangwe vaive imbwa dzakanaka kwazvo ivo havana iyo yekuwedzera kwehungwaru nehunhu hwatakawana muWillow.'
'Sangana neBere! Iyo inotyisa Dachshund / toyi Poodle -). Haasi chinhu kunze kwemurume akanaka anoda kufadza. Anoda kumbundirwa, asiwo anodawo kuzvimiririra kana ari panze. Iye zvechokwadi ane hound maari. Mhino yake inogara iri pasi. Pandinoenda zvangu kufamba kwemazuva ese naye ndinotora leash kuitira patinenge tiri mutaundi, asi zvimwe kunze kwekuti anofamba padivi pangu kana mukati meiyo 10-ft radius yangu. Anorara ega mudanga rake asi anofarira kuuya kuzorara mangwanani kweawa kana zvakadaro. Ah, zvakare kudzidzisa dzimba kwaive nyore naye, zvakatora anenge mavhiki mashanu. Mumufananidzo wakasungirirwa iye akatenderedza mwedzi mina. Anotaridzika sezvaaive pandakamusvitsa pamasvondo masere ekuberekwa. Pasina kutaura - MUNHU WESE anomuda. Ndine vanhu vanondibvunza nguva dzese kuti ndakamuwana kupi uye kana vane zvakawanda. '
'Uyu ndiye Moeglee, wedu mudiki Doxiepoo pamwedzi mishanu. Amai vake idiki yakachena Dachshund uye baba vake vakachena Poodle. '
Ona mimwe mienzaniso yeiyo Doxiepoo
Doxiepoo Mifananidzo 1
Chinyorwa cheDachshund Sanganisa Mbudzi Dzakabereka
Chinyorwa chePoodle Sanganisa Inobereka Imbwa
min pini jack russell sanganisa vana vekutengesa
mufudzi weAustralia uye musanganiswa wesheltie
dema uye tan american cocker spaniel